Home Wararka Maanta QOOR QOOR oo soo saaray liiska musharaxiin cusub
QOOR QOOR oo soo saaray liiska musharaxiin cusub
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa caawa soo saaray liiska musharixiinta u tartamaya kursiga u dambeeya doorashada golaha Aqalka Sare ee BFS.
Kursigaan oo horay loo doortay waxaa 18-kii bishii November iska casilay Senator Yuusuf Dhegey oo hadda ah Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Farxaan Cali Maxamuud iyo Naciima Yuusuf Maxamed ayaa lagu shaaciyey warqad ka soo baxday xafiiska Qoor Qoor inay ku tartami doonaan kuriga Aqalka Sare ee beesha Duduble, Farxaan waa wasiirka Maaliyadda Galmudug, waxana la sheegay in Qoor Qoor uu asaga la rabo kursigaas.
12-kii bishii Agoosto 2021 ayaa Yuusuf Geelle Ugaas (Yuusuf Dhegey) loo doortay kursigaan, balse 18-kii November ayuu iska casilay.
Yuusuf Dhegey ayaa xilligaas shaaciyey in sababta uu isku casilay ay tahay in cidiisa uu ka dhex sameeyo siyaasad caafimaad qabta, balse mar kale ayuu soo qaatay kursiga isla beesha ee golaha shacabka.
Waa kursigii u dambeeyey ee doorashada golaha Aqalka Sare ee dalka, waxaana horay loo doortay dhamaan kuraasta kale ee Aqalka Sare, dhawaan waxaa lagu wadaa in guddiga doorashada Galmudug uu soo saaro jadwalka doorashada kursigaas.